The Rohingya News Bank : Christine Schraner Burgener
Showing posts with label Christine Schraner Burgener. Show all posts
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တာနဲ့ အမုန်းပွားအောင် လုပ်တာတွေကို အရပ်ဘက်နဲ့ စစ်ဘက်အာဏာ ပိုင်တွေ အခိုင်အမာ တညီတညွတ်ထဲ ဆန့်ကျင်ကြရမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener က ပြောပါတယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြန်ပြီးပြုပြင်ဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ထောက်ပြ ပါတယ်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, mm, ကုလအထွေထွေညီလာခံ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကို တရားစွဲနိုင်သလား၊ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ မေးမြန်းချက်
၂၀၁၉၊ စက် ၂၂
မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေ သိန်းချီ ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်နှစ် ရှိခဲ့ပါပြီ။ လူ ခုနစ်သိန်းကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ပြေးခဲ့ရပြီး လူ တသောင်းလောက် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, DASSK, mm, သတင်း, မေးမြန်းချက်
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, en, Myanmar, News, UN Envoy
2nd March, 2019 04:24:24
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, en, Myanmar, News, UNSC
UN special envoy visits refugee camps in Sittwe
Nyan Lynn Aung 24 Jan 2019
UN Special Envoy Christine Schraner Burgener. Photo - EPA
The United Nations special envoy to Myanmar on Wednesday visited Muslim refugees who were displaced by the 2012 conflict in northern Rakhine State,astate official said.
A Rakhine government official said Christine Schraner Burgener met with refugees at A Nout Ye and Kal Ni Pyin camps in Pauktaw township.
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, en, M.refugee.camp, News, Pauktaw, Rakhine
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် Burgener ရခိုင်ပြည် နယ် သွားရောက်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ရဲ့ အခု မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း တွေ့ရှိချက်တွေကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ အစီရင်ခံတင်ပြ မှာပါ။ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်က မနေ့ကတော့ ရခိုင်ခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့ကို ရောက်ရှိပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဌာနချုပ်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, mm, စစ်တွေ, ရခိုင်, သတင်း